Articles Calvary Burmese Church | Calvary Burmese Church
Category Archives: Articles Calvary Burmese Church
Global Prayer Day Program
May 19, 2013: Global prayer day, Advertisements
Ma Lu Bu on Mothers’ Day
May 12, 2013: Mothers’ Day Testimony
Butch Austin on Mothers’ Day
May 12, 2013: Butch Austin
March 24, 2013; In March 3013, Rev. Dr. Saw Ler Htoo’s commitment into the Lord’s ministry turned 25 years.
February 3, 2013;
မိဘမဲ့ ကလေးများကို ထောက်ပံ့ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက် များကို တင်ပြခြင်း
Fast and Prayer Committee
January 13, 2013 – Fast and Prayer committee’s presentation (နားဆင်ရန်)
Ma Thidar – Fast and Prayer
January 13, 2013 ကရာနီ မြန်မာ အသင်းတော်၏ အစာရှောင် ဆုတောင်း အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် မသီတာ ၏
နှလုံးသားနှင့်ပေးသော လက် ဆောင်
Christmas eve, December 24, 2012 တွင် ပြဇတ် အားဖြင့်
Christmas eve – Choir
2012 Christmas eve တွင် သံစုံဓမ္မသီချင်း (choir)
Christmas eve – Trio
2012 Christmas eve (Dec 24) တွင် ခရစ္စမတ် သီချင်း အားဖြင့် ပါဝင်
Christmas eve – Khaikhai and Suzie
2012 Christmas eve (Dec 24) တွင် ခရစ္စမတ်သီချင်းဖြင့်
Christmas eve – Women Fellowship
2012 Christmas eve တွင် ပြဇတ်ဖြင့် ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်း
Christmas eve – Men fellowship
2012 Christmas eve တွင် သံခြပ် ဖြင့် ပါဝင် ဂုဏ်တော်
Christmas eve – CBC Youth
2012 Christmas eve တွင် တိုင်းရင်းသား အက ဖြင့်
Christmas eve – Yadana Oo and Suzi
2012 Chrismas eve (Dec 24) တွင် ခရစ္စမတ်သီချင်း ဖြင့် ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းသော
CBC baby’s Calvary Style
2012’s Christmas eve တွင် ပါဝင် ဂုဏ်တော် ချီးမွမ်သော ၂၀၁၂ တွင် မွေးဖွါးကြသည့်
CBC Christmas eve – Ko Su – Yadana Oo
CBC ၏ Christmas eve (December 24) တွင် ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းသော
CBC ကလေးများ၏ ခရစ္စမတ်နေ့ ဒီဇင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် Church School ကလေးများ၏ presentation … (နားဆင်ရန်)
December 23, CBC အသင်းတော် ကလေးများ ခရစ္စမတ်နေ့ တွင် presentation ဖြင့် ပါဝင်ကြသော
Calvary Burmese Church of Washington DC has Burmese traditional Food Fair every year. The 11th Annual event will be held in Frederick as following information. Place: First Baptist Church, 7040 … Continue reading →
The winners will be announced on Easter Sunday, April 24, 2011. For raffle ticket information, Please contact: Tessa Quinlan – tessanmike@mac.com Mansen- mansen@gmail.com Rev. Saw Ler Htoo – lerhtoo@hotmail.com Cherry … Continue reading →
Calvary Burmese Church’s brief History by one of its founding members
Please click Fullscreen to read more conveniently. Calvary’s Brief History by Aunty Doreen http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=49418633&access_key=key-11ox1bnrq59mzea4dnvw&page=1&viewMode=list
ကရာနီမြန်မာအသင်းတော်၏ အသစ်ဖွဲ့စည်းသော သင်းထောက်လူကြီးများအတွက် သင်းထောက်များတို့ရဲ့ တာဝန် နှင့်ပတ်သက်ပြီးခွန်အားပေးတိုက်တွန်းခြင်း တစ်ခုကို အောက်တိုဘာလ (၃၀) ၂၀၁၀ ၌ ကိုမြင့်လွင်-မလုဘူ တို့နေအိမ်တွင်ပြုလုပ်ပါသည်။ ပုသိမ်မြန်မာနှစ်ချင်းအသင်းတော်၏ သိက္ခာတော်ရဆရာ ဦးထွန်းလှမှ သင်းထောက်လူကြီးတို့ သိအပ်၊ စောင့်ထိန်းအပ်သော အရာများနှင့်ပတ်သက်ပြီး တိုက်တွန်း ဝေငှ ခွန်အားပေးသွားပါသည်။ အလားတူ ခွန်အားပေးတိုက်တွန်းခြင်းအစီအစဉ် တစ်ခုကို ဗာဂျီးနီးယားတွင်နေထိုင်သော ကရာနီမြန်မာ အသင်းတော် သင်းထောက်လူကြီးများအတွက် … Continue reading →